အကောင်းဆုံး သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အအေးခန်း သိုလှောင် ထုတ်လုပ်သူ နှင့် စက်ရုံ | Runte
သိုလှောင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်- ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပန်းသီး၊ အာလူး၊ ဆလတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဘရိုကိုလီ၊ ငှက်ပျောသီးနှင့် အခြားသစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။
◾0~ 15 ဒီဂရီ၊ သင်သိမ်းဆည်းလိုသည့်ပစ္စည်းများအတိုင်း ချိန်ညှိပါ။
◾ High-density foam storage board ၊ ကောင်းသောအပူကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု။
◾ နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ် Bitzer၊ Carrier compressor၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။
◾ ပန်ကာသည် ကြီးမားသောလေထုထည်နှင့် တူညီသောလေထောက်ပံ့မှုနှင့်အတူ ပြည်တွင်းပထမလိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ကို လက်ခံသည်။
◾ ပေါင်းစပ်ပုံဆွဲဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် သင့်အား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အသီးအနှံနှင့် စားနိုင်သော သိုလှောင်မှု ကန့်သတ်ချက်
အပူချိန် အခန်း၏ -5 ℃ ~ + 15 ℃ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်များ သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စသည်ဖြင့်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အအေးခန်း ဒီဇိုင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး
အအေးခန်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အရည်အချင်းစစ်
အချိန်မီ အရောင်းကြိုတင်ရောင်းချမှု ဝန်ဆောင်မှု
0.426 မီလီမီတာ သံမဏိပြား၊ အမြှုပ်ထွက်နှုန်းသည် ၃၈-၄၅ ကီလိုဂရမ်အထိ ရှိပြီး အပူထိန်းသိမ်းမှု စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပြီး ပုံပျက်ခြင်း မရှိပေ။
Bitzer/Carrier/Emerson နှင့် အခြားယူနစ်များ
မူလတင်သွင်းလာသော ကွန်ပရက်ဆာသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် ကြီးမားသော အအေးခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေခြင်း။
လေထုထည်သည် တူညီပြီး လေဝင်လေထွက်အကွာအဝေးသည် ရှည်လျားသောကြောင့် အအေးသိုလှောင်မှု၏ တစ်သမတ်တည်း အအေးခံမှုကို သေချာစေနိုင်သည်။
ပတ္တာတံခါး သို့မဟုတ် လျှောတံခါးကို အရည်အသွေးမြင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံကာ ကောင်းမွန်သော တံဆိပ်ခတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို အသုံးပြု၍ လိုအပ်ချက်အရ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
နိုင်ငံတကာ အမှတ်တံဆိပ် အရည်အသွေးမြင့် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ အပူချိန်ကို ထိန်းညှိရာတွင် အဆင်ပြေစေပါသည်။
အရည်များနှင့် ဓာတ်ငွေ့များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ထိန်းညှိပေးခြင်း
refrigerant စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ပါ။
ပြွန်နံရံသည် ချောမွေ့ပြီး အညစ်အကြေးများနှင့် အောက်ဆိုက်စကေးများ ကင်းစင်ပါသည်။ ပိုက်လိုင်း၏ တင်းကျပ်မှုနှင့် သန့်ရှင်းမှုကို သေချာပါစေ။
ရေစိုခံ၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံပြီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ တောက်ပမှုမြင့်မားမှု၊ ကြီးမားသော အလင်းဧရိယာ။
ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ တည်ငြိမ်သော အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ဂိုဒေါင်အတွင်းနှင့် အပြင်တွင် လေလဲလှယ်မှုကို သီးခြားခွဲထုတ်ပါ။
1. ဖိလစ်ပိုင် အအေးခန်းငယ်လေး
2. Malaysia Fruit and Vegetable အအေးခန်း
3. British processing room အအေးခန်း
4. US container အအေးခန်း
5. Uruguay Logistics အအေးခန်း
6. American Food အအေးခန်း
7. ကမ္ဘောဒီးယား အအေးခန်းကို လုပ်ဆောင်ခြင်း။
8. Nigeria Vaccine အအေးခန်း
ယခင်- ပင်လယ်စာများအတွက် Stainless Steel Display ရေခဲသေတ္တာ
နောက်တစ်ခု: Bitzer Semi-closed Piston Condensing Unit
Insulation Panels အအေးခန်း
လတ်ဆတ်သောငါးများနှင့် အသားများကို အမြန်ပေါက်ကွဲစေသော ရေခဲသေတ္တာ အအေးခန်း...